24 ႀကိမ္ေျမာက္ ​ေအာင္ဘာေလ ထီဖြင့္ပြဲ - Pyone Pyone Lay
က်ပ္သိန္း ၁၅၀၀၀ ဆု
က်ပ္သိန္း ၁၀၀၀၀ ဆု
က်ပ္ သိန္း ၅၀၀၀ ဆု
က်ပ္ သိန္း ၂၀၀၀ ဆု
ဘ ၉၇၅၁၆၃ . အ ၇၈၀၉၆၃ .ဍ ၇၄၁၆၅၅ . က ၈၈၈၁၀၅
က်ပ္ သိန္း ၁၀၀၀ ဆု . ကစ ၂၀၈၉၉၅ .ထ ၃၆၅၁၈၃ .႒ ၅၆၄၃၉၆ .ပ ၃၂၀၅၃၉ .ဍ ၉၈၉၀၀၁ .ပ ၁၉၆၆၉၂ .က က ၇၂၉၅၃၂
ေဝေဝဆာဆာ ပေဒသာ က်ပ္ ၃ သိန္း ဆုမ်ား
ကဃ ၁၁၄၄၆ .ဟ ၇၀၂၈၇ .သ ၃၄၂၈၄ .ကဃ ၇၀၀၁၂ .ဎ ၁၄၄၅၂
က ၃၅၂၃၁ .႒ ၃၂၂၆၀ .က ၈၃၇၃၄ .န ၉၅၆၁၈ .ဓ ၈၉၃၀၂
ဌ ၇၀၆၃၆ .ကဆ ၄၂၃၂၈ .ဘ ၄၃၃၀၇ .ကဃ ၉၁၉၅၁ .က ၃၁၃၅၉
ဎ ၅၈၃၁၁ .ယ ၇၀၆၄၃ .ရ ၉၀၉၀၈ .ဌ ၉၉၇၀၁ .ကခ ၆၂၅၈၅
ေဝေဝဆာဆာ ပေဒသာ က်ပ္ ၂ သိန္း ဆု
ဌ ၈၈၅၆ .စ ၉၁၆၄ .အ ၈၃၈၇ .သ ၈၅၁၅ .ကင ၇၁၃၉ .ဘ ၃၇၃၀ .ဠ ၂၆၇၁ .ဟ ၃၀၈၁ .သ ၂၂၉၂ .လ ၉၇၅၅ .ထ ၃၁၉၇
င ၆၅၅၆ .ဟ ၁၃၆၈ .ဖ ၆၄၁၅ .အ ၆၆၅၂ .ကခ ၉၁၀၀ .အ ၅၇၀၆ .ဌ ၃၇၁၆ .ကဃ ၇၃၂၈
ေဝေဝဆာဆာပေဒ သာ က်ပ္ ၁ သိန္းဆု
မ ၁၉၃ .ဗ ၅၃၉ .ဘ ၂၇၂ .ဎ ၁၅၀ .ကဆ ၆၆၃. ည၉၃၈ .ကဂ ၈၇၅ .စ် ၇၄၅ .ကစ် ၄၉၂ .ပ ၇၃၄ .ယ ၃၀၄. ဃ ၆၀၁ .ကဂ ၉၆၆
ကစ ၉၆၄ .ကစ ၈၁၂ .ဂ ၃၂၃ .ဂ ၉၉၁ .ဋ ၉၂၂ .ယ ၈၃၆ .ဃ ၃၈၁ .ဗ ၅၃၉
ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ က်ပ္ ၅ ေသာင္းဆု
က်ပ္သိန္း ၅၀၀ ဆု
က က ၇၂၃၃၉၃
က်ပ္သိန္း ၂၀၀ ဆု
က်ပ္သိန္း ၁၀၀ ဆု
တ ၅၉၈၀၁၇ င ၉၃၃၄၂၈ ဎ ၈၅၉၇၈၄ ဂ ၇၁၈၃၃၃ ခ ၂၁၇၂၇၀ ကစ် ၅၂၈၇၁၂ မ ၃၂၉၇၈၆ ကဆ ၄၄၅၇၆၉ ဋ ၄၄၇၀၃၉ ခ ၄၄၁၁၆၁
ဠ ၇၃၅၂၄၃ ဇ ၇၃၄၉၃၆ က ၈၈၃၃၃၁ ကဂ ၁၁၄၂၄၅ ဍ ၆၉၁၀၄၉ ကစ ၈၂၃၉၅၁ သ ၆၇၆၀၆၅ သ ၁၁၇၉၂၂
24 ကြိမ်မြောက် ​အောင်ဘာလေ ထီဖွင့်ပွဲ
ကျပ်သိန်း ၁၅၀၀၀ ဆု
ကျပ်သိန်း ၁၀၀၀၀ ဆု
ကျပ် သိန်း ၅၀၀၀ ဆု
ကျပ် သိန်း ၂၀၀၀ ဆု
ကျပ် သိန်း ၁၀၀၀ ဆု
က က ၇၂၉၅၃၂
ဝေဝေဆာဆာ ပဒေသာ ကျပ် ၃ သိန်း ဆုများ
ဝေဝေဆာဆာ ပဒေသာ ကျပ် ၂ သိန်း ဆု
ဝေဝေဆာဆာပဒေ သာ ကျပ် ၁ သိန်းဆု
ဝေဝေဆာဆာပဒေသာ ကျပ် ၅ သောင်းဆု
ကျပ်သိန်း ၅၀၀ ဆု
ကျပ်သိန်း ၂၀၀ ဆု
ကျပ်သိန်း ၁၀၀ ဆု